လင်္ကာ: မိခင်တစ်ဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း- အပိုင်း( ၂ )
.မြန်မာဂိတ်ကမဖွင့်သေးတော့တရုပ်ပြည်ဘက်ကိုလမ်းကြိုလမ်းကြားကဖြတ်ပြီးနာရီဝက်လောက်သွား ရတယ်…တရုပ်ပြည်ကြယ်ခေါင်ဂိတ်ကိုရောက်သွားတယ်… မူဆယ်နဲ့ကြယ်ခေါင်ကမြေတစ်ဆက်တည်းဘာမှမခြားဘူး….နယ်ခြားကျောက်တိုင်လေးဘဲခြားထား တယ်…တရုပ်ပြည်ထဲရောက်တော့ဂိတ်မဖွင့်သေးလို့စောင့်နေရသေးတယ်…စောင့်ရင်းနဲ့အိမ်သာ သွားကြတော့အိမ်သာကဗမာအိမ်သာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး…..တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘေးအကာနိမ့်နိမ့်လေးတွေဘဲ ကာထားတယ် …ရှေ့တည့်တည့်မှာအကာလုံးဝမထားဘူး ညစ်ပတ်တာလည်းအလွန်ဘဲ…ရေလုံးဝမသုံးဘူး…..နောက်တစ်ကြိမ်မသွားချင်တော့ဘူး…..၆း၀၀နာရီ ထိုးတော့ဂိတ်ဖွင့်တယ်…နေ့ကူးလက်မှတ်တစ်လှည့်စီသွားလုပ်ကြတယ်…..ပြီးတော့တရုပ်ကားနဲ့ရွှေလီကိုဆက်ထွက်ခဲ့တယ်….
နာရီဝက်လောက်နေတော့ ရွှေလီမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့တံတားကိုဖြတ်ရတယ်…..နောက်တော့ရွှေလီမြို့ထဲ ကိုရောက် လာကြတယ်…ယိုးဒယားတန်းကိုဖြတ်ပြီး ချစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားကြတယ်…ချစ်လ္ဘက်ရည် ဆိုင်က ABSDF ကဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့…အဲဒီမှာစခန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမည့်သူနဲ့သွားတွေ့ရတယ်
သားကိုမေမေသိတာက ကျောင်းသားအရေးကိစ္စနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့ဘဲသိတယ်…. မင်းကိုဒီလိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး….
မင်းအဖေလည်းဒီစာရတော့ တက်တခေါက်ခေါက် ဖြစ်နေတယ်…. လို့ပြောလိုက်တယ်….
အဲဒီတော့သန်းဇော်က ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ မိဘတွေမသိဘဲ လုပ်ခိုင်းတာဘဲ…. ဘယ်မိဘသိမလဲလို့ပြောတယ်….. ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ငါ့သားဟာ န၀တ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဖူး… .ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားဘဲ…လို့ငြင်းလိုက်ချင်တာအသဲကိုယားနေ တာဘဲ… .
ဒါပေမယ့်ကိုယ်တို့က လက်နက်မဲ့…သူတို့မှာအချိန်မရွေးသတ်လို့ရတဲ့ လက်နက်တွေရှိတယ်….သူတို့လက်ခုတ်ထဲကရေဖြစ်နေတော့ ရေငုံနှုတ် ပိတ်နေရတယ်…..
…ရောက်ရောက်ချင်းမတွေ့ရသေးဘူး…CSသံချောင်းရဲ့ရဲဘော်လေးမိုးကြိုးဆိုတာနဲ့တွေ့တယ်… အသက်၂၀တောင်ရှိပုံမရဘူး…မိုးညှင်းဘက်ကလို့ပြောတယ်… လ္ဘက်ရည်ဖျော်တဲ့မောင်ညွန့်ဆိုတာတွေ့တယ်….နံပြားတို့ပလာတာတို့လုပ်တဲ့ကိုကျော်စိန်ဆိုတာ
လည်းရှိ တယ်… .ဒီဆိုင်မှာဘဲအစားအသောက်မှာစားကြတယ်…..
အောင်နိုင်ကိုသိတာက သားကဘောင်ဒရီလမ်း သူတို့ပါတီမှာနေတုံးက ကိုယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မန္တလေး(ဆေး)က အောင်နိုင်လို့ ပြောပြထားလို့သိတာပါ…ဒါပေမယ့်သူက မမှတ်မိတာလား မသိချင် ဟန်ဆောင်နေတာလားမသိဘူး…ကိုယ်ကလည်းသိပေမယ့် မသိဟန်ဆောင်နေပါတယ်….. သူ့ကိုဥက္ကဋ္ဌဆိုတာလည်းသိပါတယ်…ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မြက်ခင်းသစ်ထဲမှာသူတို့အကြောင်းပါ ထားတာကိုး…..သွားခါနီးသမီးအကြီးက အောင်နိုင်အဲဒီမှာဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေတာလို့ပြောလိုက်သေးတယ်…..
ကိုမောင်မောင်တို့ပြန်လာတော့ မနက်ဖြန်သွားဘို့တိုင်ပင်ကြတယ်….. ကားခကတရုပ်ငွေ၅၀၀ကျပ်ကျတယ်တဲ့…
ကိုယ်တို့အဖွဲ့က၃၀၀ခံရမယ်….သူတို့က၂၀၀ကျခံမယ်တဲ့…..ငွေ၃၀၀နဲ့အခြေအတင်ပြောနေရင်စိတ်ခုပြီး ကလေးတွေကိုတခုခု လုပ်မှာစိုးလို့ ပေးပါ့မယ်လို့ပြောကြတယ်…..
သိရတာက ကိုယ်တို့ကို ရွှေလီကနေ စခန်းအရောက်စရိတ်ကို သူတို့ကုန်ကျခံမှာလို့ပြောထားတာ…. ဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားလည်းမသိဘူး…စရိတ်တ၀က်ခံခိုင်းတာ…
ဘက်လို့ ထင်တယ်…နာရီဝက်လောက် သွားရတယ်…မြေပြန့်ဒေသဆိုတော့ ပဲ၊ဂျုံ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးအနှံ တွေစိုက်ထားတာ တွေ့ရတယ်…နောင်တောင်းရောက်တော့ ကလေးမလေးတွေက စက်ဘီး ငှားမလားဆိုပြီး အ ပြေးအလွှားမေးကြတယ်…နောက်မှသိရတာက စက်ဘီးငှားစီးသွားရင် နမ့်ခမ်းထိ သွား လို့ရတယ်လို့သိရတယ်…
တရုပ်ရဲစခန်းရောက်တော့၁၂း၀၀နာရီထိုးပြီ….အရာရှိက ပုံစံစာရွက်တွေ သော့ခတ်ထားခဲ့လို့ ညနေ၃း၀၀ မှရမယ်ဆိုလို့ စောင့်ရတယ်… ကားသမားက၄း၀၀နာရီမှပြန်လာခေါ်မယ်ဆိုပြီးကားဆွဲဘို့ထွက်သွားတယ်…
ကိုယ်တို့လည်းဗမာပြည်လိုမှတ်ပြီး အမြန်ပြီးအောင် ပိုက်ဆံနဲနဲ ပေးလိုက်ပါလား လို့ပြောတော့ တရုပ်ပြည်ကဒီလို လာပ် ပေးလာတ်ယူ လုပ်လို့မရဘူးတဲ့… ဒါနဲ့ခရီးကလည်းပန်း ခြေထောက်ကလည်းညောင်းမို့ရုံးရှေ့ကခုံရှည်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း ခြေထောက် ကို အပေါ်တင်ပြီး တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်နေလိုက်တယ်…
အဲဒါတရုပ် ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ရှူးရှူးရှဲရှဲရောက်လာပြီး ဒီလိုမထိုင်ရဘူး ခြေထောက်အောက်ချထိုင်ရမယ် ပြောလို့အရေးတကြီးချထိုင်ရတယ်
ဒါပေမယ့်အိမ်သာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအညံ့ဆုံးနဲ့ အညစ်ပတ်ဆုံးပါဘဲ….. အိမ်သာမဖြစ်မနေသွားတော့လည်း…အထဲမှာ အဖွားကြီး၃ယောက်တန်းစီ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတွေ့ တယ် …. ပထမတော့လန့်သွားတာပေါ့….နောက်တော့မထူးပါဘူးဆိုပြီး သူတို့ဘေး ကအလွတ်မှာဝင်ထိုင်ပြီး အပေါ့ အလေးသွားရတယ်…
ဘီးကျော့ပတ် တွေနဲ့အညာအဖွားကြီး တွေနဲ့တူတယ်….နမ့်ခမ်းနဲ့နီးတော့တရုပ်လိုရောရှမ်းလိုရောပြောတတ်ကြတယ်…..
အုပ်ရှိထားလို့ထပ်လုပ်စရာမလိုဘူး….FORM ဖြည့်ပေးမယ့်ကားသမားမရှိလို့ စတိုးဆိုင်ကတရုပ်မလေး ကိုတစ်ယောက်၃၀ကျပ်စီ ပေးပြီးဖြည့်ခိုင်းရတယ်…
သူတို့ကစားနည်းက တစ်မျိုးပါလားပေါ့….မသိတဲ့သူဆိုရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ထဲကထွက်ပြေးသွားမလားဘဲ… စားသောက်ပြီးကြတော့ ပိုက်ဆံရှင်းဘို့ ခေါ်တော့ အမျိုးသမီးကဘာဟင်းတွေနဲ့စားကြတာလည်းလို့ ဗမာလိုပြောရော………. ဦးအေးနိုင်ကဒေါသအရမ်းဖြစ်သွားပြီး ထပြီးရိုက်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာ တယ် လို့ပြောတယ်…ဟင်းမှာတုံးကဗမာလိုလုံးဝမတတ်သလိုနေနေပြီး ငွေရှင်းမယ်ဆိုတော့မှဗမာလိုပြော
ဥက္ကဋ္ဌကပြောတယ်တဲ့…သူ့ကိုဥက္ကဋ္ဌလို့လည်းမသိပါစေနဲ့….ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမိတ်မဆက်ပေးပါနဲ့ လို့ပြောတယ်တဲ့…သူ့ကိုသွားစကားမပြောဘို့ကိုမောင်မောင်က ပြောတယ်…သူလည်းကိုယ်တို့နဲ့အတူ စခန်းကိုပြန်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့…..
ဗျူဟာ( ၂ )ဘက်ကပြန်လာတာလို့နောက်မှသိရတယ်….
တည်းခိုခန်းမှာကတည်းက တိုင်ပင်လာတာက ကလေးတွေပါလာရင် ရွှေလီမှာ၂ရက်၃ရက်နေပြီး စားချင်တာစားဝယ်ချင်တာဝယ်ပြီးမှ ပြန်မယ်လို့ပြောထားကြတယ်….၁၀း၃၀လောက်ရွှေလီကထွက်လာကြတယ်…
…တောတောင်တွေတွေ့လိုက်၊မြို့ရွာတွေတွေ့လိုက်နဲ့ပေါ့…..ကားကက်ဆက်ထဲကနေကျောင်း သားတွေဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီ သီချင်းတွေဖွင့်ပြတယ်….
နောက်တော့ဥက္ကဋ္ဌကကိုမောင်မောင်ကိုမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ခိုင်းတယ်….တဦးချင်းမိတ်ဆက်ပြီး စကားနဲနဲပြောတယ်….နောက်ဘယ်သူမှစကားမပြောဖြစ်ကြတော့ဘူး…..ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရဘို့အတွက် စိတ်ကူးနေကြတယ်…ပုတီးစိတ်…ဂါထာရွတ်သူကရွတ်ပေါ့….ကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ…
အကောင်းပကတိမှတွေ့ရပါ့မလား….ခြေကျိုးလက်ကျိုးမျက်စေ့ကန်းနဲ့ တွေ့ရမလား….ဟာ…ကျနော်တို့စစ်ရင်းနဲ့လက်လွန်သွားလို့ဆိုပြီး မြေပုံဘဲ တွေ့ရမလား….လားပေါင်းများစွာနဲ့တွေးရင်းလိုက်လာရတယ်… .ဥက္ကဋ္ဌကလည်းခပ်တည်တည်နဲ့ ဖေါ်ဖေါ်ရွေရွေမရှိတော့ ပိုပြီးသံသယ၀င်တာပေါ့…….
စားကြ တာ…၆၀၀ကျပ်လောက်ကျတာ ဥက္ကဋ္ဌကဘဲထုတ်ရှင်းလိုက်တယ်…..
၂း၃၀လောက်ကားဆက်ထွက်လာတာ၎နာရီလောက်ကြာတော့ဆမားဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်တယ်….ဆမားမှာPASSPORTစာအုပ်လေးတွေပြန်အပ်ခဲ့ရတယ်…..သွားအပ်နေတုံးမှာနောက်နားကကျောင်းသားတစ်ယောက် ကစပြီးနှုတ်ဆက်တယ်…..ကားပေါ်မှာဥက္ကဋ္ဌရယ်၊သူ့ရဲဘော်လေးရယ်၊၅၀၁ရင်းမှူးရယ်ပါတယ်…. ကိုယ်တို့နောက်ကတစ်ယောက်က(၅၀၁)ရင်းမှူး သိုက်ထွန်းဦးဆိုတာ သိရတယ်…. သူလည်းတလမ်းလုံးစကားမပြောဘဲ လိုက်လာတာ….ဆမားရောက်မှကိုယ့်ကို အန်တီက ကိုရဲအမေလား…. ကိုရဲဖမ်းတုံးကသူမျက်ရည်ကျရတဲ့အ ကြောင်း ….ကိုရဲနဲ့သူနဲ့အတူအိပ် အတူစား နေခဲ့ရတဲ့အကြောင်း …..ရှေ့တန်းသွားလည်း အတူတူဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ….သူကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာခဲ့တဲ့အကြောင်း….. နဲ့MASTER တက်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရဲပြောပြလို့မခိုင်ကို အာယုတို့အတန်းက လို့သိရကြောင်း သူတို့ကိုစာဂျပိုးတွေမို့သိပ်မသိကြောင်းဝင်းဝင်းကြိုင်ကိုတော့ သိကြောင်း ပြောပြတယ်…..အာယုလည်း အမေရိကားကိုပညာသင်ပါသွားကြောင်းပြောပြတယ်…..
( ကိုအာယုဆိုတာက ကိုဇာဂနာရဲ့ညီတစ်ဝမ်းကွဲပါ )
ဒါနဲ့သားနေကောင်းရဲ့ လားမေးတော့ ဟိုတလောကထုံဖြစ်လို့ဆေးထိုးရတဲ့အကြောင်း သူတို့ကိုဘယ်လိုမှ မထင်ပါနဲ့တဲ့… စိတ်မရှိပါနဲ့တဲ့…. ဖမ်းထားတာဆိုတော့အချုပ်ထောင်ထဲမှာနေရတာဆိုတော့အပြင်မှာလိုမဟုတ်ကြောင်း
ပြောတယ်…..၀ဏ္ဏဇော်အကြောင်းလည်းပြောပြတယ်…..ဒီလိုနဲ့ဆက်ထွက်လာကြတာ ရှားဟော့ပါဆိုတဲ့ရွာ ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ကချင်ဒေသဖြစ်တဲ့ လိုင်စင်စခန်းကိုဝင်လာခဲ့တယ်….. KIAဂိတ်ကိုပထမတွေ့ရတယ်…. KIA ရဲမေတွေစောင့်တယ်.
ကားဝင်ခွင့်ပေးတယ်….ကိုက်၅၀လောက်သွားပြီးတော့ ABSDF ဂိတ်ကိုရောက်တယ်…. မိန်းကလေးစောင့်နေတာတန်းဖွင့်ပေးတယ်….နဲနဲကားလှိမ့်လာတော့ ရောက်ကာနီးမှကားစက်ရပ်သွားတယ်….
ညာဘက်ကတောင်ကုန်းပေါ်မှာABSDF ခွပ်ဒေါင်းအလံလွှင့်ထားတာတွေ့တယ်…. အဲဒီရှေ့မှာကျောက်တုံးတွေနဲ့ABSDF စာလုံးဖေါ်ထားတာတွေ့တယ်….
ဒါနဲ့ကားစက်ပြန်နှိုးလို့ရတော့ တောင်ကွေ့တစ်ခုလည်းကွေ့လိုက်ရော ခန်းမတစ်ခုရှေ့မှာကားကိုထိုး ရပ် လိုက်တယ်….ကားပေါ်ကဆင်းတော့ မိန်းကလေးတွေ ယောင်္ကျားလေးတွေဝိုင်းလာကြတယ်….
.နောက်မှမိဘတွေမှန်းသိပြီး အထုတ်တွေဝိုင်းဆွဲကြပြီး စစ်ရုံးဆီခေါ်လာကြတယ်….
စစ်ရုံးရှေ့မှာ ပါလာတဲ့အထုတ်တွေကိုရှာဖွေကြတယ်… .နောက်အခန်းထဲခေါ်သွားပြီး ကိုယ်တို့အမျိုးသမီးတွေကို ကျောင်းသူလေးတွေက တစ်ယောက်စီ ကိုယ်ပေါ် မှာရှာကြတယ်…
အားလုံးရှာဖွေပြီးတော့ ကိုမောင်မောင်နဲ့ဦးအေးနိုင်ကိုထားခဲ့ပြီး ကိုယ်တို့၅ယောက်ကို စစ်ရုံးထက်မြင့်တဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်ခေါ်သွားတယ်…စခန်းလည်းရောက်ရောအေးလိုက်တာအလွန်ပါဘဲ…. အပေါ်ရောက်တော့နေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်…. ၀ါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့အိပ်စင်လေးတွေပေါ့….. တစ်ခန်းမှာအိပ်စင်၂ခုရှိတယ်….၂ခန်းရှိတယ်.တစ်ယောက်ပိုနေတော့ ကိုယ်နဲ့အန်တီစန်းက အိပ်စင် တစ်ခုမှာ၂ယောက်အိပ်ရတယ်…..ကိုယ်တို့ကိုစောင့်ရှောင့် ကျွေးမွေးဘို့ ရဲမေ၂ယောက် ထားတယ်…. ထမင်းလည်းအရေးတကြီးချက်ကျွေးတယ်…
.ရောက်ခါစဆိုတော့မိန်းကလေးတွေရော ယောင်္ကျားလေးတွေရော လာကြ သတင်းမေးကြပေါ့….
ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ခံသန်းဇော်ကလည်း ရေအဆင်သင့်သုံးရအောင် ရေတစ်ပုံးဆွဲပြီးလာပို့တယ်…
ညရေးညတာထရင် မိန်းကလေး၂ယောက်ကိုနှိုးဘို့ပြောတယ်…. .ဆေးဆရာမဘောက်မိုင်တို့လည်းလာလည်ကြတယ်… .အနွေးထည်တွေလာပေးကြတယ်…. ဘာမှအားမနာဘို့ သားသမီးတွေနဲ့နောက်နေ့ပေးတွေ့မှာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပြောပြကြတယ်… မိန်းကလေးအုပ်စုက သူတို့မိဘတွေလာသလိုမျိုးပျော်နေကြတယ်……..
မနက်စောစောထတော့ ကုတင်ခြေရင်းမှာ ရေတွေနင်းမိလို့အန်တီစန်းကိုပြောလိုက်တယ်…. အန်တီစန်းကတရေးနိုးတော့အပြင်မထွက်ရဲဘူး….ကင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လူမှားပစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကျွတ်ကျွတ် အိတ်ထဲအပေါ့သွားပြီးကုတင်တိုင်မှာချိတ်ထားလိုက်တာတဲ့…. ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ကိုကြည့်တော့ အပေါက်ကြီး နဲ့… ဘာမှမရှိတော့ဘူး… .မြေကြီးမှာရောက်ကုန်တာပေါ့….ပြောပြောပြီးရီမိကြတယ်……
မနက်ကျတော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းတဲပေါ်တက်လာတယ်….အေးအေးဆေးဆေး အားမနာဘဲနေကြဘို့ ကလေးတွေကိုပေးတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်…. ကိုယ့်ကိုလည်းအန်တီ့ကိုမြင်ဘူးတယ်တဲ့…. ဟုတ်တယ်…….ဘောင်ဒရီလမ်းကကိုရဲတို့ဆီလာလာနေတာလို့ပြောတယ်… .အောင်ဇော်မင်းကိုလည်းသတိရကြောင်း ပြောပေးပါလို့ပြောတယ်… .နောက်စကားနဲနဲပြောပြီးပြန်ဆင်းသွားတယ်….
အဲဒါအပြင်ထွက်ကြည့်ပြီး ကလေးတွေကိုဘယ်မှာထားသလဲမေးတော့ ကိုယ်တို့ရှေ့က အလံတိုင်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းရဲ့နောက်ကအနိမ့်ပိုင်းထဲမှာထားတယ်လို့ပြောတယ်…..
နဲ့ဒီနေ့ပေးတွေ့မယ်ပြောတော့ဝမ်းသာနေကြတယ်….ရဲမေ၂ယောက်က ထောက်လှမ်းရေးတဲမှာထမင်းသွားချက်နေတုံး သက်လင်း(တာတီးပိုး)နဲ့ဖိုးနှောင်းတို့ကတစ်လှည့်စီ လာစောင့်ကြတယ်…. သူတို့ကိုလည်းသားတွေအကြောင်းမေးရတာပေါ့…. ကိုရဲဆိုရင်ထုံဖြစ်လို့ ခြေတွေလက်တွေမြှောက် မရ လို့ ဆေးထိုးလိုက်မှပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်….
ထောက်လှမ်းရေးလို့ထင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းပြီး ဘယ်လိုရိုက်တာ…ဘယ်လိုစစ်တာ… ဘယ်လိုသေနတ်နဲ့ပစ်လိုက်တာဆိုတာကို… ဒီ၁၇နှစ်သားသာရှိသေးတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်စုက တပ်သားတာတီးပိုးကမြိန်ရေယှက်ရေပြောပြနေတာ….
ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့လူသတ်ဝါဒဟာ ၀င်ရောက်နေပါလား…. ဘ၀တူဇာတ်တူသားကိုစားနေကြတာပါလား…. ကွန်မြူနစ်ဝါဒတွေမှိုင်းမိနေကြတာလား…. သူတို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကွန်မြူနစ်တွေများ စိမ့်ဝင်နေ သလား လို့ ထင်ရတယ်….
ကိုယ်တို့အားလုံးကရောက်တာနဲ့ဘုရားရှီခိုး…ပုတီးစိပ်…ဂါထာရွတ်နဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုလုံး တရားသံတွေဝေနေတယ်….. အဲဒါပဋ္ဌာန်း(၂၄)ပစ္စည်းမှာပါတဲ့….အဓိပတိပစ္စယောလို့ရွတ်တာကို…ဒီထောက်လှမ်းရေးက
ကလေးက မထိတထိပစ္စယောလို့ပြောင်ဆိုသေးတယ်…. .သြော်…တော်တော်အသိနက်တဲ့ကလေးပါလားလို့…
သူ့ပြောကြားချက်အရ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီး လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားတာ…. အဲဒီကျောင်းသားက ဂါထာမန္တယားတွေရွတ်တော့ ကြိုးပြေသွားတာကို…. မင်းဂါထာကတယ်အစွမ်းထက်ပါလား….နောက်မင်းကြိုးမပြေရအောင် ရွတ်ချင်တဲ့ဂါထာ ရွတ်ဆိုပြီး လက်ဝါး ကပ်တိုင်မှာကပ်ပြီး လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဘက်ကိုဓါးမြှောင်နဲ့ထိုးစိုက်ပြီး တစ်ညလုံးပစ် ထား လိုက် တာ သွေးလွန်ပြီးသေသွားတယ်လို့ ဂုဏ်ယူပြီးပြောတာ ရွံရှာစွာနဲ့ဘဲ နားထောင်နေရတယ်…..
မနက်၉း၀၀နာရီလောက်မနက်စာထမင်းကျွေးတယ်….မုန်ညင်းနဲ့အာလူးကအမြဲပါတယ်…၀က်သား အာလူး ၊ အမဲသားအာလူး၊ ကြက်ဥကြော်တစ်ပတ်(၂)ခါလောက်စားရတယ်….. ကျန်တာကမုန်ညင်းကို ချဉ်ရည်ချက်လိုက် ကြော်လိုက်၊ဂေါ်ဖီကြော်၊ မြေပဲကြော်၊အမျိုးမျိုးကို ရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင် ချက်ကျွေး တတ်တဲ့တင်စန်းဦးနဲ့မငွေ တို့ကိုမမေ့ပါဘူး……
အေးကလည်းအေးတော့ ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီး မီးဖိုမှာမီးလှုံရင်း စကားပြောရတယ်…. ရန်ကုန်မှာနွေဖြစ်ပေမယ့် အဆများစွာအေးတယ်…. ညရောက်တော့ဂွမ်းကပ်တွေကရေခဲတုံးလိုအေးစက်နေတယ်…တော်တော်နဲ့မနွေးလာဘူး…. .ထုတ်တန်းမှာဝါးလုံးတန်းပြီး တန်းမှာသံကြိုးတချောင်းချပြီးအဖျားမှာချိတ်တစ်ခုတပ်ပြီး ရေနွေးအိုးတည် ရတယ်….ရုပ်ရှင်ထဲကသူပုန်စခန်းတွေမှာ ရေနွေးအိုးတည်တဲ့အတိုင်းဘဲ….သားသမီးတွေအသက်ရှင်
ရေးအတွက် သက်စွန့်ဆံဖျား သူပုန်စခန်းလာပြီး သူတို့ဓလေ့သူတို့ထုံးစံအတိုင်း နေရတာလို့ အောင့်မေ့မိတယ်….
ညနေစာစားပြီးတော့ ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်ကို ဘိုဘိုနဲ့တွေ့ဘို့ခေါ်တယ်…..မကြာဘူးအရီကို ၀ဏ္ဏဇော် နဲ့တွေ့ဘို့ခေါ်တယ်….နောက်တော့အန်တီကြီးနဲ့ အန်တီစန်းကို… သူတို့သားသမီးတွေ နဲ့တွေ့ ဘို့ခေါ် တယ်…(၃)နှစ်ကျော်လောက် သားသမီးတွေနဲ့မတွေ့ရတော့တာ ခုမှပြန်တွေ့ရတော့ ဝမ်းသာ ၀မ်းနဲဖြစ်ကြ တာပေါ့….
အန်တီကြီးကနှလုံးရောဂါရှိတော့ စိတ်ထိမ်းပါလို့မှာရတယ်…..မမြင့်ကြည်နဲ့အရီကို သူတို့သားတွေ နဲ့ပေးတွေ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ တဲမှာ VIDEO ကြည့် ဘို့ ခေါ်သွားတယ်တဲ့…. အန်တီကြီးနဲ့အန်တီစန်းကည၁၀း၀၀နာရီကျော်တဲ့အထိပြန်မလာဘူး…
တဲမှာက ကိုယ်ရယ် ကိုမောင်မောင်ရယ်… .ရဲမေ၂ယောက်ရယ်ကျန်တယ်….
အဲဒါဒီနေ့တော့ မတွေ့ရတော့ဘူး ထင်ပြီး အိပ်ယာထဲဝင်အိပ်နေလိုက်တယ်…. ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ကျောင်းသားရဲဘော်တစ်ယောက်က အန်တီစိန်ရေဆိုပြီးလာခေါ်တယ်…. .မှောင်မဲမဲမှာသူတို့ကိုတွဲပြီး တောင်အောက်ဆင်းလိုက်သွားတယ်..အောက်ရောက်တော့မနေ့ကတည်းက ကွဲသွားတဲ့ဦးအေးနိုင်ကိုတွေ့တယ်…
ခဏနေတော့ ဦးအေးနိုင်သား ကျော်နိုင်ဦးနဲ့ကိုယ့်သားရဲလင်းတို့နှစ်ယောက်တွဲဝင်လာတယ်…
၀င်လာလာချင်းမိဘတွေကို ထိုင်ကန်တော့ကြတယ်….သားတို့မေမေတို့လာမှန်းသိလားဆိုတော့ မနက်ကသိတယ်တဲ့… ခုလည်းသူများတွေလာလာခေါ်လို့ သူတို့ကိုလည်းလာခေါ် မှာဘဲဆိုပြီး စောင့်နေကြ တာတဲ့….
ကျန်တာကနေဒွန်းတို့သက်ထွန်းတို့ပေါ့……သူတို့ရှေ့မှာဘဲ….ကဲ မင်းတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေ မင်းတို့မိဘတွေ ကိုပြောလိုက်ဆိုတော့….
သားက သူန၀တထောက်လှမ်းရေးအလုပ်ကို ၁၉၈၅ထဲကလုပ်တာတဲ့… .ငွေယားတောင်ကိုဗိုလ်သင်တန်းသွားဖြေတာမဟုတ်ဘူး….ထောက်လှမ်းရေးသင်တန်း(၆)လသွားတက်ရတာ
….အဲဒီထောက်လှမ်းရေးအလုပ်လုပ်ဖို့ အဖေကဆက်သွယ်ပေးတာ….ဘဏ်မှာလုပ်တာက ထလရ အလုပ် ကိုကာဘာယူဘို့လုပ်တာ….လစာ၅၅၀ ကျပ်ရတာကိုလည်း အမေမသိအောင် သုံးပစ်တာတဲ့…..
သူပြောတာတွေနားထောင်ပြီး ကြောက်လို့ လန့်လို့ လိမ်ပြီးပြောတဲ့ လိမ်စဉ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာ… ကိုယ့်ရင်ထဲမှာသိနေတယ်….ယုံလည်းမယုံဘူး…ရင်ထဲမှာ သရောသရီရီနေရတယ်…. တစ်လျှောက်လုံးလည်းVIDEO ကရိုက်နေတယ်….ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်…. သားကိုမေမေသိတာက ကျောင်းသားအရေးကိစ္စနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့ ဘဲ သိတယ်…. မင်းကိုဒီလိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး….
အဲဒီတော့သန်းဇော်က ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ မိဘတွေမသိဘဲ လုပ်ခိုင်းတာဘဲ…. ဘယ်မိဘသိမလဲလို့ပြောတယ်….. ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ငါ့သားဟာ န၀တ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဖူး… .ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားဘဲ…လို့ငြင်းလိုက်ချင်တာအသဲကိုယားနေတာဘဲ… .ဒါပေမယ့်ကိုယ်တို့က လက်နက်မဲ့…သူတို့မှာအချိန်မရွေးသတ်လို့ရတဲ့ လက်နက်တွေရှိတယ်….သူတို့လက်ခုတ်ထဲကရေဖြစ်နေတော့ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေရတယ်…..
အစ်ကိုနဲ့အစ်မအိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း…. အဖေနဲ့အမေအသက်ကြီးလာပြီဖြစ်လို့ သားကိုဘဲအားကိုးစရာရှိတဲ့အကြောင်း… .ပြောတော့….သားကသူတို့ဘက်လှည့်ပြီး ကျနော်ဘဲအကြီးဆုံးရှိတော့တာ….အမေအဖေတို့ကိုလုပ်ကျွေးဘို့ ပြန်လိုက်သွားမယ်လို့ပြောတယ်…..
အကြောင်း…ကလေးတွေကျန်းမာရေးအခြေအနေ မကောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောကြတယ်…
ထောက်လှမ်းရေးတဲမှာဘဲ…မိဘတစ်ဦးချင်းရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ရေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပြောပြ ချက်အရ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်မှန်းသိရပါတယ်… .နောက်နောင်ကို မလုပ်စေရပါဘူး…. ဒီကိုလာတာလည်းန၀တ ကသွားချင်သွား…မသွားနဲ့လို့လည်းမပြောဘူး…. သွားပါလို့လည်းမပြောပါဘူးလို့ ပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတယ်… .အားလုံးလည်း ဒီစာသားအတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရတာပါ…..
မိခင်တစ်ဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း- အပိုင်း( ၁ )